Indlela yokuphucula iziphumo zam injini yokukhangela?
Ukuphuculwa kweenjini zophando yinkqubo yesayithi yakho yokuyila ukuphucula indawo yayo kwiziphumo zophando lwe-organic kwi-Google SERP. I-SEO yenzelwe ukwandisa iimeko eziphambili kumsebenzi wakho wokukhangela ukuba abathengi bakho bangasebenzisa ukukhangela okufana neemveliso okanye iinkonzo zakho.Iimpawu ezibalulekileyo ze-SEO zibandakanya ukufaneleka, ukuguqulwa, nokufumanisa. I-website yokubaluleka ibhekisele kwizinto ezisemgangathweni kwi-market niche yakho enokuthi iphucule amava omsebenzisi kwisayithi lakho kwaye vumela abasebenzisi bokukhangela baqonde ukuba yeyiphi indawo yakho - best windows vps. Ukufumanisa konke oku malunga neendlela zokwenza uphando. Ukwandisa indawo yakho yokufumanisa, kufuneka uqhagamshelane ne-intanethi kunye nabathengi bakho. Unokwenza oko usebenzisa ukuthengiswa kweendaba zentlalo okanye ukuthengiswa kwe-imeyile. Ukukhwabanisa ngokukodwa kubhekisela kumbakala wobugcisa bokusebenza. Kufuneka wenze indawo yakho ibonakale kwindawo yokukhangela kwaye uvumele ukuba idibanise lonke ulwazi olutsha olongeza kwiwebhusayithi yakho.
Kule nqaku, siza kuxubusha indlela yokuphembelela ngayo yonke le migaqo yesithathu yokukhangela injini kunye nokufumana iziphumo zeyona injini.
Thatha ixesha elithile
ukwenza uludwe lwamagama awona afanelekileyo kwi-niche yakho yemakethi kwaye ngabaphulaphuli bakho abajoliswe kuyo bangasebenzisa ukukhangela. Kucetyiswa ukuba ukhange ibinzana elide elide elingenakho ukuncintisana. Ukuphucula inkqubo yeenkcazo zegama elingundoqo kunye nokugcina ixesha elininzi, ndikucebisa ukuba usebenzise izixhobo zophando ngegama elingundoqo kwi-intanethi njenge-Semalt Auto SEO. Ngokukhawuleza xa wenza uluhlu lwemigqaliselo efanelekileyo yokukhangela, kufuneka udale umxholo ofanelekileyo ukuwabonisa kumawebhusayithi akho. Ukuvumela i-Google bots ukuba ziqonde ukuba yeyiphi indawo yakho, faka amagama angundoqo kumagama ambalwa okuqala kwiphepha lakho lephepha kunye nakwiimeta zeemeta kunye nezihloko. Ngaphezu koko, ungabandakanya amagama akwii-URL kunye ne-ALTs kunye nee-Titles.
Yenza isetyenziswe ngolwazi olufumanekayo kwiwebhu
Namhla ngoku phantse wonke umntu ubhala malunga nokucwangciswa kwenjini yokukhangela njengoko kuyona mxholo owaziwayo Internet. Nangona kunjalo, akubona bonke aba babhali abanamava kulo mkhakha kwaye baxhomekeke kwinyani. Ngoko, kukho iiforam ezininzi kunye neewebhusayithi ezipapasha ulwazi oluphezulu kunye noluncedo. Ngelixa ezinye zeengcebiso zeengcebiso azikho naxabiso, abanye bangalimaza iziphumo zeenjini zakho zokukhangela. Yingakho kufuneka ukhethe imithombo yakho kakuhle. Ndiyincoma ukufunda iinkcukacha ezibonelelwe ngeengcali zeshishini ezifana neSemalt, Moz kunye neNjineli yeNjini yeNgcaciso.
Ukuphucula ikhowudi yakho ye-HTML
Ukuqinisekisa ukuba ii-injini zokukhangela ziyakwazi ukuqonda indawo yakho, kufuneka ukhangele kwiziko lakho le-HTML. Ukuphucula isayithi lakho lobuchwepheshe lobugcisa, kufuneka usebenzise ubuchwepheshe bokusesikweni njengamaSpredishithi eSitayela. Ngaphezu koko, kufuneka ukhethe isayithi yakho kwenye yeenkqubo ezininzi zokuphatha izinto ezinokusetyenziswa njenge-WordPress, Joomla okanye iMagento. Ezi nkqubo zenza ukuba wenze zonke izilungiso ezifunekayo kwiwebhusayithi yakho naluphi na ixesha oludingayo.
Yenza lula ukuhamba kwendawo yakho
indawo. Ukwenza ukuhamba kwewebhusayithi yakho kulula ukuyisebenzisa, ungakha izalathisi ezicacileyo kuzo zonke izicwangciso zesayithi. Kufuneka uphephe ukusebenzisa kwakhona unxibelelwano lwe-flash animated kunye namamenyu aqoqeshwe ngokugqithiseleyo ukuvumela abasebenzisi be-crawler baqhube isayithi lakho ngaphandle kobunzima. Dala ukuhamba okulula nokulula ukuvumela abathengi bakho bakwazi ukufumana oko bakufunayo ekuqaleni.